Kera kamera inonyadzisa Samsung uye Apple iye zvino ine 5G - asi inorambidzwa muUnited States. - TELES RELAY
HOME » TECH & TELECOM Kamera foni inonyadzisa Samsung uye Apple iye zvino ine 5G - asi yakarambidzwa muUnited States.
Kera kamera inonyadzisa Samsung uye Apple iye zvino ine 5G - asi inorambidzwa muUnited States.
Verizon yakangotanga Galaxy S10 5G asi Samsung haisi iyo kambani inopa 5G smartphones gore rino. Vafambisi vemunyika yose vakave vakatangawo kutumira mapuraneti e5G uye smartphones anoenderana uye vashandi veBritain ndivo vokupedzisira kugadzirira kuti 5G yavo itange. Zvisinei, imwe yemafuta ekutanga kupa 5G ruzivo muBrithani ibasa raunowana zvakaoma kugovera muUnited States, kunyange kana iwe uchingova wekare 4G version. Ichi ndechokuti inogadzirwa neHuawei, kambani yeChina iyo hurumende yeUnited States inongorongedzwa nezvimwe zvinotora chirango .
Pakuvambwa kweMate 20 mhedziso yekupedzisira kwekuwa, Huawei akaunza zvimwe zvinhu zvakanga zvisingawaniki pane dzimwe nhumbi dze Android panguva iyoyo. Mutevedzeri 20 Pro ndiyo yepamusoro yevaya vatatu vaMate 20 mafaira uye Huawei zvakare akatanga mutambo Mate 20 pamwe chete nemuenzaniso wemurume 20 X akaisa pfungwa pamitambo. Iyo yekupedzisira ichangobva kugamuchira kutsigirwa kubva ku5G uye inowanikwa muUnitedi ye999 £ unlocked. Ndiyo 200 £ kupfuura 4G
Huawei akafumura Chishanu 5G version ye Mate 20 X muLondon, inoshuma 9to5Google uye ndizvo chaizvo zvaunotarisira - 5G version yeHuawei yakatangwa semutambo wekutamba gore rapera.
Mufananidzo Wemusoro: Huawei
Foni ine yakakura imwechete ye 7,2 FullView FullView skrini, chipirini cheKirin 980, 6 GB RAM, 128 Chigadziro chekuchengetedza uye lensiti yekutanga katatu. ikamera huru kupfuura 4G version. Asi foni ine bheteri shoma (4 200 mAh ne5 000 mAh) uye haisi ye 3,5 mm headphone jack ye 4G version. Iwe unoramba uchitenga mari shomanana yebhateri ye40 W pamuenzaniso we5G, kunyange zvakadaro. Izvi zvimwe zvichida nekuda kweimwe nzvimbo yepakati inotorwa nezvinhu zve 5G, kusanganisira Bhalong 5000G 5G chip uye 5G antenna.
Uyu Mukadzi 20 X 5G zviri pachena kuti ichiri chigadzirwa chemashoko ezvinyorwa zvose uye inoshanda kune vashandi vemunharaunda. muBritain, kusanganisira EE, O2, Three uye Vodafone. Mukadzi 20 X 5G ndiyo yekutanga Huawei 5G foni inotangwa gore rino, asi inofanira kunge yakanyatsoteverwa neMate Mate X iyo kambani yakazarurwa kare gore rino.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://bgr.com/2019/05/17/huawei-mate-20-x-5g-release-date-price-and-specs-official/
HP Omen X 2S, imwe yepakombiyuta ine mawindo maviri
11 Inoparadza Nyaya Pamusoro peCraigslist, Iyo Inomutsa Mamwe Mabhiriyoni Dhora Pakati Pegore Uye Inoshandisa Only 50 People